Soundcore Liberty 3 Pro bụ nhọrọ ọhụrụ nwere ANC na nkọwa dị elu | Ozi gadget
Miguel Hernandez | 05/11/2021 13:00 | Ngwa, Ngwa, General, Nyocha
Coreda bụ ụlọ ọrụ ọdịyo guzobela onwe ya na mpaghara a dị egwu site na imepụta ngwaahịa nwere ụkpụrụ dị elu, dịka ọ dị na ndị ọzọ anyị na-enyocha ebe a na Gadget News nke ụdị Cambridge Audio ma ọ bụ Jabra. Yabụ na anyị ejiri Soundcore gbadata azụmaahịa ugbu a.
Anyị na-eleba anya nke ọma na Liberty 3 Pro ọhụrụ sitere na Soundcore, ekweisi TWS nwere ANC na Hi-Res audio nke ga-atọ ndị ọrụ ụtọ. Chọpụta na anyị ka Soundcore Liberty 3 Pro siri pụta ma ọ bụrụ na ha na-emezu nkwa ndị ahụ niile.
2 Nka na ụzụ àgwà na "Golden ụda"
3 Nkagbu mkpọtụ na ngwa
4 Nnwere onwe na nkọwa nke ngwaahịa "adịchaghị".
Ndị a nnwere onwe 3 Pro nwere ihe dị iche iche na ọ bụ ihe a na-enwe ekele maka ahịa maka ekweisi TWS ebe ụfọdụ yiri ka ọ bụ mbipụta nke ndị ọzọ. N'okwu a, Soundcore na-agbasi mbọ ike na imepụta ihe dị iche ọbụna n'ọnọdụ ya, nke a dị ka "igbe igbe" nke na-emepe site n'ibe elu ma mara mma. Banyere agba, anyị nwere ike ịhọrọ ọcha, isi awọ ndụ ndụ, lilac na oji. Ha nwere usoro rọba gburugburu na-emegharị ya na ntị anyị, n'ihi ya, ha adịghị adapụ ma kpochie ya nke ọma. Ihe a niile na-echefughị ​​na anyị na-emekọ ihe n'ezie na ekweisi ntị, ya bụ, a na-etinye ha na ntị.
Ngwugwu ọdịnaya: Igwe ekweisi + Mpempe ntị silicone asatọ + 3 mpụta mpụta + ihe nchaji + eriri chaja.
Akụkụ ikpe na ibu: 7,1 x 5,5 x 2,7 cm na gram 45
Ọ bụrụ na ị masịrị ha, ị nwere ike zụta ha na ọnụahịa kacha mma na Amazon
N'ụzọ dị otú a, site n'ichepụta ha, ha na-ekwe ka ikuku na-ekesa site na usoro nke na-ebelata nrụgide n'ime ntị ma na-eme ka ọ dị mma kwa ụbọchị. Anyị nwere isi ihe ergonomic atọ bụ isi, “fin” dị n'elu, roba na ala na njide na-eme na mpe mpe akwa silicone. A na-akpaghasị imewe na ha bụ nnọọ ala.
Nka na ụzụ àgwà na "Golden ụda"
Ugbu a, anyị na-aga kpere teknuzu. A na-emepụta ha na igwefoto n'ihu na nhazi nke na-enye ohere iji belata nha ma melite ugboro ugboro nke ụda. Ọ gụnyekwara onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ihe agha na n'ikpeazụ onye ọkwọ ụgbọ ala ike 10,6 millimeter. Ọ na-eji teknụzụ ụda coaxial ACAA 2.0 nwere kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ site na sistemụ nhazi nke gụnyere igwe okwu dị n'ime.
Codec ọdịyo akwadoro bụ LDAC, AAC na SBC, N'ụkpụrụ anyị ga-enwe ụda mkpebi dị elu n'agbanyeghị na ha anaghị aga aka na ọkọlọtọ Qualcomm's aptX. Ekwesiri ighota na ha bu ezigbo ekweisi ikuku nke onwe, anyi ga-enwe ike iji ha iche iche n'enweghi nsogbu.
Anyị nwere usoro a ụda ahaziri onwe ya site na sistemụ HearID na gburugburu ụda n'akụkụ atọ. Dịka anyị maara na ị ka chọrọ ka gị na ha mee mmega ahụ, ị ​​gaghị atụfu mmiri nguzogide mmiri IPX4 nke ahụ ga-edozi ọtụtụ ojiji anyị nwere ike ịtụ anya ya. Anyị enweghị ozi zuru oke na ngwaike ime n'ihe gbasara njikọta, anyị maara na ọ bụ Bluetooth 5 yana codec LDAC ahụ e kwuru n'elu na-enye anyị ohere ịnweta ụda Hi-Res, ya bụ, iji data okpukpu atọ karịa usoro Bluetooth ọkọlọtọ. . Anker Soundcore ...
Nkagbu mkpọtụ na ngwa
Igwe okwu igwe ejikọtara ọnụ isii nwere ọgụgụ isi Artificial na-eme ka mkpọtụ mkpọtụ nke nnwere onwe 3 Pro dị oke mma yana anyị enweela ikele ekele na ule anyị. N'agbanyeghị ihe a niile, anyị nwere ike iji ohere atọ dị iche iche dabere na mmasị na mkpa anyị. Ihe ha kpọrọ HearID ANC na-achọpụta ọkwa ụda dị n'èzí na n'ime ntị, yabụ anyị nwere ike ịhazigharị nkwụsịtụ ụda atọ site na nke kacha ala ruo na nke kachasị elu dabere n'ụdị mkpọtụ anyị na-aghọta. Ihe a niile na-echefughị ​​akụkọ ifo "mode transparency" nke anyị enwebeghị ike ịnwale ebe ọ bụ na ọ naghị etinye ya ruo mgbe mmelite ọzọ, a na-akpọ usoro a Enchance Vocal Mode.
N'ihi na ihe a niile anyị nwere ngwa nke Coreda (android / iPhone) nwere ọtụtụ ọrụ yana ezigbo interface ọrụ. N'ime ngwa a, anyị nwere ike ịhazigharị mmeghachi omume na mmetụ ahụ anyị na-eme na ekweisi iji jiri njikwa mmetụ ha na-emekọrịta ihe, yana gbanwee ụfọdụ ntọala njikọ na mmasị na ngwaọrụ ndị ọzọ. Kedu ka ọ ga - esi bụrụ ma ọ bụghị, anyị nwere usoro nhazi nha nke anyị nwere ike iji gwuo wee họrọ ụdị ọkacha mmasị anyị.
Nnwere onwe na nkọwa nke ngwaahịa "adịchaghị".
Anker's Soundcore enyebeghị anyị ozi akọwapụtara gbasara ikike batrị mAh nke ekweisi ndị a. Ee ha kwere anyị nkwa 8 awa iji na otu ụgwọ, nke ejirila pasent 10 ruo 15 belata n'ule anyị na mkpochapụ mkpọtụ agbanwuru. Anyị nwere ngụkọta nke Awa 32 ọ bụrụ na anyị agụnye ebubo nke ikpe, nke n'otu ụzọ ahụ, anyị anọwo na gburugburu 31 awa na ngụkọta.
Nke a ikpe na-enye ohere anyị chaja ekweisi nke mere na n'ime nanị nkeji iri na ise ha na-enye anyị awa atọ ọzọ nke ịkpọghachi. Ọzọkwa, A na-eme ya site na iji eriri USB-C, mana kedu ka ọ ga-esi bụrụ ma anyị nwere Nchaji ikuku na ọkọlọtọ Qi n'akụkụ ala ya, yana LED atọ n'ihu na-agwa anyị ọnọdụ nnwere onwe. All data ndị a dịtụ mma nke ndị Liberty Air 3 Pro na Liberty 2 Pro na-enye. N'ogo nke nnwere onwe, nnwere onwe 3 Pro ndị a nọ n'ọkwa nke kacha mma, n'agbanyeghị na nha ha enyelarị ezi okwukwe na ha ga-enwe ihe pụtara ìhè. na ngalaba a.
Ndị nnwere onwe 3 Pro a tụrụ anyị n'anya nke ukwuu n'ịdị mma ha dị mma na nkọwa zuru oke ebe anyị nwere ike ịchọta ụdị nkwekọrịta na ugboro ole ọ bụla. Nkagbu mkpọtụ ahụ pụtara ìhè, ma na-agafe agafe ma na-arụsi ọrụ ike, na igwe okwu ya dị mma enyela nzaghachi dị ukwuu maka mkpa ịkpọ oku ma ọ bụ ijide ogbako vidiyo. Njikọ Bluetooth kwụsiri ike n'akụkụ niile. Ọ na-adọrọ mmasị, ee, nkwalite bass gabigara ókè yana na njikwa mmetụ anaghị anabata nke ọma mgbe ọ bụla anyị ga-achọ. Ọnụ ya dị gburugburu 159,99 euro na Amazon na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Anker.
Nnwere onwe 3 Pro
Ihe na: November 5 nke 2021
Ezigbo ụda dị mma
Ngwa zuru oke na nnwere onwe
Bass emelitere nke ukwuu
Njikwa aka na-ada mgbe ụfọdụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Soundcore Liberty 3 Pro bụ nhọrọ ọhụrụ nwere ANC na nkọwa dị elu